Daawo: Rasaas ka dhaceysa Caasimadda Wadanka Gabon – idalenews.com
Daawo: Rasaas ka dhaceysa Caasimadda Wadanka Gabon
Gobon(INO)-Ka dib markii Arbacadii la shaaciyay in doorashada madaxtinimada dalkaasi uu ku guuleystay Madaxweyne Ali Bongo, ayaa waxaa Magaalada Libreville isugu soo baxay taageere-yaasha hogaamiyaha mucaaradka Jean Ping, markii uu saluugay natiijada doorashada.
Guddiga doorashada, ayaa waxay sheegeen in Madaxweyne Ali Bongo uu Jean Ping kaga guuleystay codad dhan lix kun oo cod, laakiin waxaa taasi si xoogan uga biyo diiday siyaasiga sida adag ula tartamay Madaxweynaha.
Magaalada Libreville, ayaa waxaa ka soconaaya isku dhacyo u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo taageere-yaasha mucaaradka, iyadoo ciidamadu ay bannaanbaxayaashu u adeegsanayaan rasaasta nool nool iyo biyaha diiran.
Taageere-yaasha mucaaradka, ayaa waxay Xukuumadda Libreville ku eedeeyeen in ay ku shubatay codadkii doorashada, isla-markaana uu Jean Ping yahay Madaxweynaha xaqa ah.
Nin degan Xarunta Gabon, ayaa sheegay in uu arkay ugu yaraan meydadka laba ruux iyo dhaawacyada in ka badan soddon ruux oo kale, waxaana uu xaaladdu ku sheegay mid aad u kacsan.
Dhanka kale ciidamada amniga, ayaa weeraray xarunta xisbiga mucaaradka. Jean Ping ayaa sheegay in ciidamada ay laba qof ku dileen weerarkaasi.
Afhayeen u hadlay Madaxtooyada Gabon, ayaa sheegay in hawlgalkaasi uu ahaa mid xididada loogu siibaayay waxa uu ugu yeeray dembiileyaal.
Dad careysan, ayaa xalay dab qabadsiiyay Xarunta Baarlamaanka Gabon ee Magaalada Libreville, iyagoo u muuqday inay ka careysan yihiin natiijada doorashada, oo sida ay sheegeen lagu shubtay.
Madaxtooyada, ayaa waxay taageere-yaasha siyaasiga Jean Ping ku eedeysay in ay ka masuul yihiin dabkii xalay la qabadsiiyay Xarunta Baarlamaanka.
Daawo: Dr. Cabdi Cadow oo Shaaciyey inuu yahay Musharax u taagan Xildhibaanimada DFS Ee 2016
Daawo: Donald Trump oo booqasho ku tagey Wadanka Mexico